Jabulela inkululeko yokungena ezimakethe ezihlukanisiwe, imikhiqizo yonyaka ekunikezelweni kwemikhiqizo yabantu etholakalayo ukulethwa komhlaba. I-Trivoshop inemikhiqizo eyizigidi nezigaba ezingaphezu kuka-6000 ukunika amandla abaxhumana nathi ukujabulela ukuba nemikhiqizo efanelekile ukuze ivumelane neziteshi ezifanele. Siyabazisa abalingani bethu abaxhumene nabo futhi silapha ukuzosiza ngokubambisana okusezingeni lomhlaba ngezinhlelo zethu zeziteshi eziningi. bhalisela manje futhi ujabulele ubuchwepheshe bethu services!
Mayelana nohlelo lwethu lokuxhumana
Thola (10%) ikhomishini lapho ikhasimende liqeda ukuthenga ngenkokhelo evumelekile. Kuyinqubo engenamthungo usebenzisa ukucwaningwa kwe-AI ngezinkokhelo ngqo kwi-akhawunti yakho. Jabulela inzuzo yokwenza imali encedisayo elula 24/7.
Sisebenzisane ne-Sales & Orders!
Inethiwekhi Yokuxhumana Nama-oda Yabashicileli ivumela izindawo zokuthengisa, izinjini zokuthenga eziqhathaniswayo, ama-blogger, abashukumisi, nokuningi ukuxhumana nathi njengozakwethu.
Landa isibambiso sethu sokumaketha, okuphakelayo komkhiqizo, uthumele umyalezo nathi, futhi ulandelele ukukhokhelwa nokusebenza kwekhomishini ngqo kusuka ku-akhawunti yakho ye-Sales & Orders Publisher.
bhalisela ukuba ngumshicileli we-S & O namuhla!